Yintoni ukuthengisa ngentsholongwane? Eminye imizekelo kunye nesizathu sokuba basebenze (okanye khange basebenze) | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 2, 2014 NgoLwesihlanu, Oktobha 3, 2014 Douglas Karr
Ngokuthandwa kweendaba zosasazo, ndingathemba ukuba uninzi lwamashishini luhlalutya lonke iphulo abalenzayo kunye nethemba lokuba kwabelwane ngalo ngomlomo ukwandisa ukufikelela kwalo kunye namandla.
Ukuthengisa ngentsholongwane kubhekisa kubuchwephesha apho umxholo ubuchule bokuyila umxholo ohambisa ngokulula kwaye ubandakanyeka kakhulu ukuze kwabelwane ngawo ngokukhawuleza ngabantu abaninzi. Isithuthi lelona candelo liphambili-imfuno yokuba eliphakathi lisasazeke ebantwini kunokuba lihlawule imali eninzi yokunyusa okanye yokudlala i-airplay. Iividiyo ezihlekisayo zithandwa kakhulu, kodwa kukwakho iimemes zomfanekiso, kwaye kukwabelwana ngenkuthazo ekwabelwana ngayo njengezaphulelo zeqela.
Nalu uphononongo olukhulu lwexesha lomjikelo
ukusuka UEmerson Spartz, Ingcali yentsholongwane ye-Intanethi.
Imizekelo yamaPhulo okuThengisa ngentsholongwane
Ihobe Lokwenene (ly) Lihle
Iilori zeVolvo kunye noJean-Claude Van Damme.
Yazala ntoni Delov yedijithali Inguqulelo ebhalwe nguChuck Norris
kwaye Isitalato iJump Street Inguqulelo kunye noChanning Tatum.
I-infographic evela Eyona Digri yokuThengisa ikwabonelela ngeengcebiso zokuba yintoni enceda umxholo uhambe wentsholongwane kunye nento onokuthi uyiphephe xa usenza iphulo elenzelwe ukuya kwintsholongwane.
tags: I-Channing Tatum yevidiyo yentsholongwaneihobe lobuhle bokweneneIjuba lentsholongwaneEmerson spartzjean-claude van damme yividiyo yentsholongwaneumxholo wentsholongwaneintengiso yentsholongwaneiqhinga lentsholongwaneividiyo yentsholongwanevolvo iilori ividiyo wentsholongwaneyintoni umxholo wentsholongwaneYintoni ukuthengisa ngentsholongwane
Oktobha 6, 2014 ngo-4: 42 PM
Ndiyithandile le post! Ndiza kubhekisa kuyo njengoko siceba esethu isicwangciso sokuthengisa umxholo.
Oktobha 6, 2014 ngo-9: 14 PM
Ndiyayithanda indlela osichaze ngayo ukuba masingacwangcisi kwimizamo yethu yokuhamba ngentsholongwane. Ngale ndlela iziseko ziyakhuliswa, kwaye iinkcukacha zicwangciswe kakuhle. Ukudibanisa umsitho wangoku inokuba kukwenza okanye ukwaphuka kumzamo wokuhamba wentsholongwane okanye hayi, umdla wokucinga.
Oktobha 6, 2014 ngo-11: 42 PM
UZack - ngenene. Nokuba iingcali ezisebenza kwimikhankaso yentengiso yentsholongwane ziyazi ukuba kukho umngcipheko wokuba zingahambi. Ngeso sizathu, sisebenza ukuqinisekisa ukuba amaphulo ethu ahlala esongeza uhlobo lwexabiso kunokuzama nje ukuba zihlekise okanye zingaqhelekanga. Ngale ndlela, ukuba bayabhabha, basenokubonelela ngexabiso elithile kubaphulaphuli abancinci abafikelelweyo abafikelelweyo!
Okt 9, 2014 ngexesha 6:56 AM
Iposti egqwesileyo. Ndikonwabele kakhulu. Enkosi ngokwabelana ngale mizekelo. Kuninzi kakhulu ukusebenza nzima kunye nomngcipheko obandakanyekayo kwintengiso yentsholongwane. Ngelishwa, ukuba ayisihambi ngentsholongwane kodwa ndiyavuma ngokupheleleyo ukuba akufuneki sicwangcise iphulo lokucinga ukuba liza kuhamba ngentsholongwane. Ukujonga phambili kwizithuba ezinomdla.
Novemba 4, 2016 ngo-8: 55 PM
Umzekelo olungileyo wentengiso yentsholongwane